Aqalka Sare oo Wafdigii ugu horreeyay u diray Maamul Goboleedyada – Kismaayo24 News Agency
Aqalka Sare oo Wafdigii ugu horreeyay u diray Maamul Goboleedyada
by admin 16th September 2018 16th September 2018 019
Iyadoo uu cirka galay khilaafka u dhaxeeya dowladda dhexe ee federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa waxaa golaha aqalka sare uu dhawaan shaaciyay in wafuud u kala direyso dowlad goboleedyada si loo xaliy khilaafka jira.
Wafdiga ugu horreeya ee golaha aqalka sare u diraayo dowlad goboleedyada ayaa maanta waxa ay ku wajahanyihiin Magaalada Garoowe ee Xarunta Maamulka Puntland.
Wafdigan oo ka kooban Senataro ka tirsan Aqalka Sare iyo howl wadeeno ayaa saaka ka ambabaxay magaalada Muqdisho, waxaana Garowe uga horeeya Senator C/raxmaan Faroole oo Guddoomiye u ah Wafdiga Aqalka Sare ee Puntland loo diray.
Wafdigan ayaa la kulmi doona Madaxweynaha Puntland C/weli Cali Gaas iyo golayaasha dowlad goboleedka Puntland.
Wafdi kasto ee aqalka oo loo diraayo Maamul Goboleedyada waxaa loo sameeyay Guddoomiye wafdigaas horkacaaya waxaana hadda muuqata in Aqalka sare uu xoogga saaraayo sidii loo soo afjari lahaa khilaafka u dhaxeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada.
Maxay tahay Sharuudaha lagu soo rogay Dadka Xilalka ka qabanaya Dowlad Deegaanka Soomaalida
Breaking News Barlamanka Jubbaland oo Axmed madoobe u diiday mudo kororsi
Shabaab oo dib uga baxay deeganka Camaara
admin 17th July 2016
admin 26th May 2015 27th August 2015
Sawirro: Taliyaha NISA Genral gaafow oo maanta guddiga gurmadka abaaraha ku wareejiyay deeq ka kooban…….
Tifaftiraha K24 30th March 2017